Shir looga hadlayay Khayraadka iyo Tamarta oo ka dhacay Muqdisho
Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukumadda federaalka Soomaaliya marwo fowsiyo Maxamed Sheekh, oo ay weheliyaan wasiirka ku xigeenka wasaaradda Cismaan Libaax Ibraahim iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shirka wadatashiga hindise sharciyeedka koronta.
Shirkan oo aya ka qeybgalayaan maamul goboleedyada dalka iyo Shirkadaha korontada gaarka loo leeyahay ayaa sida qorshaha yahay waxa uu socon doonaa muddo labo cesho ah.
Wasiirka wasaaradda tamarta Iyo khayraadka Biyaha ee xukumadda federaalka soomaaliya Marwo Fowsiyo Maxamed sheekh oo shirka furtay ayaa ka hadashay muhiimada uu dalka u leeyahay hindise sharciyeedkan iyo maahidaha ay uqabaan ummaadda soomaaliyeed sharcigaan.
« Banaanbax Maanta ka dhacay Magaalada Boosaaso.
Dhismaha Dekeda Hobyo oo loo yaboohay 90- Milyan oo Dollar »